ပြန်ထုတ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်ချက်များ
လူမှုစောင့်‌‌ရှောက်ဖူလုံရေး သဘောတူညီချက်ဥပဒေ ဆိုတာ ဘာလဲ?
နှစ်စဥ် နန်းခင်းကြေး တွက်ပုံတွက်နည်း
နန်းခင်းကြေးကို ပြန်ထုတ်ဖို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အလုပ်သမားပင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ယူရာ၌ ၀င်ငွေခွန်အဖြစ်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သော ၂၀ရာခိုင်နှုန်းအားပြန်လည် လျှောက်ထားလို့ရနိုင်ပါသလား?
အထက်ပါ ၀င်ငွေခွန်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်၊ အခွန်အကျိုးဆောင်တစ်ဦးဖြင့် တိုင်ပင်၍ ထိုအကျိုး‌ဆောင်မှတစ်ဆင့် အခွန်ရုံးသို့ စာရွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်းရန်နှင့် လျှောက်လွှာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။
သတိပြုရန်မှာ ပြန်လည်ထုတ်ယူထားသောပင်စင်ငွေများကို လက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဂျပန်နိုင်ငံပင်စင်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရုံမှ ပင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာပြေစာကိုပါလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြေစာကိုပါ အခွန်အကျိုးဆောင်အား တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။
လျှောက်ထားခြင်း A ပင်စင်ငွေများအားလုံးကိုလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်နှင့်အဆိုပါပင်စင်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သော ၀င်ငွေခွန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ တစ်ပါတည်း ပြန်လည်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း၊
လျှောက်ထားခြင်း B ပင်စင်ငွေများအားလုံးကိုသာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်
လျှောက်ထားခြင်း C (ခ) ကိုပြီးမြောက်ပြီး ၀င်ငွေခွန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ လျှောက်ထားခြင်းဟူ၍ ၃မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
※ ၁။ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ ‌ရှေ့နေမှာ ပင်စင်ငွေများအားလုံးကိုလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်အတွက်သာ တာ၀န်ယူဆောက်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၀င်ငွေခွန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်မူ အခွန်အကျိုးဆောင်က တာ၀န်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
※ ※၂။ လျှောက်ထားခြင်း C အား ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကနဦး ပင်စင်ငွေ (၈၀ ရာခိုင်နှုန်း)ာပေးချေပြီးကြောင်းစာရွက်တွင် ဖော်ပြထားသော နေ့စွဲမှ ၅နှစ်အတွင်း (၅နှစ်ပြည့်မည့် နှစ်၏ နှစ်ကုန်ရက်အထိ) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အား မေးမြန်းလိုပါက ကုမ္ပဏီထံသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပါ။
ကြားရက် (၁၀နာရီမှ ၁၈နာရီ)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စနေနေ့တိုင်း ယာယီပိတ်ပါသည်။
ဆွတ်နဂဲရု အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ရှေ့နေရုံး